Warshadda Tijaabada Tareenka Guud | Shiinaha Common Rail Test Bench-saareyaasha, shirkado cusub
Bench Imtixaanka Tareenka Guud
Bench Test duritaanka Shidaalka
Qaybaha Asalka ah
Qaybaha Dayactirka Kale
Qaybo ka mid ah Qalabka Dayactirka
Denso Qaybo Asal ah
Qaybaha Dayactirka Bamka
Delphi Qaybaha Asalka ah
Qalabka Kale ee Dayactirka
Qalabka Dayactirka Bamgareynta
Siemens Qaybaha Asalka ah
Cummins Qaybaha Asalka ah
Qaybaha Kale ee Astaamaha ah
Qaybaha Lagu Sameeyo Shiinaha
Saxanka Madax & Ulaha
laabta 0445110646 nolosha guud ...
CAT asalka 326-4700 shidaalka ...
Xadka Cadaadiska Denso Asalka ...
Cirbadda Shidaalka ee 'HP4 Orignal'
Cirbadaha Shidaalka Asalka ah 0950 ...
Xakamaynta Bosch Asalka ...
BOSCH bamka naaftada dhabta ah 0 ...
VDO irbadaha A2C59517051, BK ...
DELPHI bamka naaftada dhabta ah ...
DELPHI dhab ah naaftada injec ...
DELPHI irbada saliida dhabta ah ...
CAT asalka 320-0680 shidaalka ...
320D xakamaynta qalabka 326-4700 ...
Asalka HP0 shidaalka asalka ah ...
CRS-708C kursiga caadiga ah ee tijaabada tareenka
Kursiga tijaabada CRS-708C waa aalad gaar ah oo lagu tijaabiyo waxqabadka mashiinka tareenka cadaadiska sare leh iyo irbadaha, wuxuu tijaabin karaa bamka tareenka guud, injector BOSCH, SIEMENS, DELPHI iyo DENSO iyo piezo injector. Waxay tijaabisaa cirbadaha tareenka caadiga ah iyo mashiinka dareeraha dareeraha oo leh cabir sax ah oo xasilloon. Waxay ku dari kartaa nidaamka EUI / EUP iyo nidaamka HEUI.
CRS-728C kursiga caadiga ah ee tijaabada tareenka
Kursiga tijaabada CRS-728C waa aalad gaar ah oo lagu tijaabiyo waxqabadka mashiinka tareenka cadaadiska sare leh iyo irbadaha, wuxuu tijaabin karaa bamka tareenka guud, injector BOSCH, SIEMENS, DELPHI iyo DENSO iyo piezo injector.
Waxay ku dari kartaa nidaamka baaritaanka EUI / EUP iyo CAT C7 C9, tijaabi CAT 320C bamka tareenka guud.
tijaabi VP44 VP37 RED4
CRS-825C kursiga caadiga ah ee tijaabada tareenka
Kursiga tijaabada CRS-825C waa aalad gaar ah oo lagu tijaabiyo waxqabadka mashiinka tareenka ee cadaadiska sare iyo irbadaha, wuxuu tijaabin karaa bamka tareenka guud, injector BOSCH, SIEMENS, DELPHI iyo DENSO iyo piezo injector. Waxay ku dari kartaa nidaamka baaritaanka EUI / EUP iyo CAT C7 C9, tijaabi CAT 320C bamka tareenka guud.
Kursiga keydka ee EUI-200
EUI-200 waa qalab gaar ah oo lagu tijaabiyo waxqabadka EUI / EUP, uma baahna qalab kale, waxay ku wadi kartaa kambuyuutarka inuu si toos ah u shaqeeyo.
Kursiga keydka ee EUI-EUP
Tijaabiyaha EUI / EUP wuxuu u baahan yahay in lagu rakibo kursiga tijaabada, saliida tijaabada waxaa sidoo kale bixiya keydka imtixaanka sidoo kale.
HU-200 kursiga keydka, EUI-EUP & HEUI C7 C9 keydka baaritaanka nidaamka
HU-200 kursiga keydka si loo tijaabiyo keydka nidaamka EUI-EUP & HEUI C7 C9. waxay tijaabin kartaa EUI / EUP ee BOSCH, CUMMINS, DELPHI, CAT, VOLVO, SCNIA, iwm sidoo kale waxay tijaabin kartaa Caterpillar C7 / C9 HEUI hydraulic common injector.
CRS-206C tijaabiyaha cirbadaha tareenka guud
waxay tijaabin kartaa cirbadeynta tareenka guud ee BOSCH, SIEMENS, DELPHI iyo DENSO iyo sidoo kale injector piezo.
BIP functin, shaqada QR code ayaa la heli karaa.
Nidaamka hawlgalka Windows, nidaamka hawlgalka Linux labadaba waa la heli karaa.
CRS-308C tijaabiyaha cirbadaha tareenka guud
waxay tijaabin kartaa cirbadeynta tareenka guud ee BOSCH, SIEMENS, DELPHI iyo DENSO. iyo sidoo kale cirbadeynta piezo.
BIP function, QR code ayaa la heli karaa.
CRS-328C keydka tijaabada tareenka guud iyo keydka baaritaanka HEUI C7 C9
waxay tijaabin kartaa cirbadaha tareenka guud ee BOSCH, SIEMENS, DELPHI iyo DENSO, sidoo kale waxay tijaabin karaan C7 / C9 HEUI hydraulic common injector.
CAT waxay tijaabisaa qalabka baaritaanka bamka
HEUI-200 CAT C7 C9 kursiga keydka
HEUI-200 waa qalab gaar ah oo loogu talagalay baaritaanka waxqabadka cirbadeynta HEUI
CRS-205C kuraasta tijaabada cirbadeynta tareenka caadiga ah
waxay tijaabin kartaa cirbadaha tareenka ee caadiga ah ee BOSCH, SIEMENS, DELPHI iyo DENSO, iyo sidoo kale PIEZO injector.
CRS-200C keydka tijaabada tareenka ee caadiga ah
waxay tijaabin kartaa cirbadaha tareenka ee caadiga ah ee BOSCH, SIEMENS, DELPHI iyo DENSO iyo sidoo kale infektorada piezo ee dareeraha mitirka socodka
CRS-718C kursiga caadiga ah ee tijaabada tareenka
Kursiga tijaabada CRS-718C waa aalad gaar ah oo lagu tijaabiyo waxqabadka mashiinka tareenka ee cadaadiska sarreeya iyo irbadaha, waxaa lagu tijaabin karaa bamka tareenka guud, injector BOSCH, SIEMENS, DELPHI iyo DENSO iyo piezo injector. Waxay tijaabisaa cirbadaha tareenka caadiga ah iyo mashiinka dareeraha dareeraha oo leh cabir sax ah oo xasilloon. Asal ahaan, waxaa sidoo kale lagu dhejin karaa nidaamka baaritaanka ikhtiyaariga ah ee EUI / EUP, nidaamka baaritaanka CAT HEUI.
Bariga Dongyue Street Taian City Shandong Gobolka Shiinaha
Mashiinka iibinta ugu sareeya – CRS-206C r caadi ah ...
nooca cusub ee EUI / EUP iyo HEUI keydka imtixaanka
dallacsiinta qaybaha xabadka asalka ah
326-4700 CAT cirbadeynta, lagu sameeyay shiinaha, diskooga ...